घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू कर्ट Zouma बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
LB उपनाम संग एक फ्रान्सेली पेशेवर फुटबलर को पूरा कहानी प्रस्तुत गर्दछ "LaZoumance".
हाम्रो कर्ट Zouma बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू, जीवनशैली र उहाँबारे अन्य थोरै ज्ञात तथ्यहरू सामेल छन्।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको सामर्थ्य, खेल पढ्ने क्षमता र हवाई उपस्थिति। यद्यपि केवल थोरैले कर्ट Zouma को जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
कर्ट Zouma बचपन कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
सुरू गर्दै, कर्ट मुबारक Zouma फ्रान्सको लियोनमा अक्टूबर 27 को 1994th दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ एक6बच्चाहरू मध्ये एक थोरै ज्ञात आमा र उनका बुबा गाई Zouma को जन्म भएको थियो।
कर्ट Zouma बुबा - केटा। छवि क्रेडिट: 5foot5।
अफ्रिकी मूलका कालो जातिको फ्रान्सेली नागरिक लियोन, फ्रान्समा उनको जन्मस्थलमा हुर्केका थिए जहाँ उनी ठूला भाइसँगै लियोनेल र एक्सएनयूएमएक्स अन्य भाइबहिनीका रूपमा चिनिन्थे।
कर्ट Zouma फ्रान्स मा लियोन मा हुर्केका थिए। छवि क्रेडिटहरू: FPCP र WorldAtlas।
लियोनमा हुर्किएकी, जवान Zouma शुरू मा फुटबल खेल मा चासो थिएन। वास्तवमा उसले बास्केटबल खेल्न रुचायो। Zouma9वर्षको उमेर सम्म, उनले स्थानीय भाल्क्स-एन-वेलिनमा फुटबल खेल्ने प्रयास गरे र महसुस गरे कि उनी यसमा अत्यन्त राम्रो थिए।
कर्ट Zouma बचपन जीवनी तथ्य - शिक्षा र करियर निर्माण:
जौमाले भाल्क्स-एन-भेलिनको लागि खेल्न थालेको धेरै समय नबित्दै, उसले आफ्ना आमाबाबुलाई यो खेलमा खेल्ने वचन दिन्छु। यसैले, उनले आफ्ना अभिभावकलाई गर्व गर्ने उच्च उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी खेलमा राम्रोसँग भाग लिन कडा परिश्रम गरे।
कर्ट Zouma - तेस्रो प row्क्तिमा बायाँबाट तेस्रो - बालकहुद क्लब भोलक्स-एन-Velin मा। छवि क्रेडिट: FPCP।
भ्याल्क्स-एन-वेलिनमा हुँदा, जौमासँग फुटबलमा व्यापक शिक्षा र क्यारियर निर्माण थियो जसले उनले डिफेन्डरको रूपमा बसोबास गर्नु भन्दा पहिले विभिन्न स्थानहरूमा प्रयास गरेको देख्यो। प्रशिक्षणको छ सत्रमा, Zouma 15 मा 2009 वर्ष पुरानो रूपमा सेन्ट-Xtienne एकेडेमीमा सामेल भयो।
कर्ट Zouma बचपन जीवनी तथ्य - शुरुआती करियर जीवन:
यो वाउल्क्स-एन-वेलिनमा थियो कि जौमाले आफ्नो प्रतिरक्षाशील क्षमतालाई तिखार्छिन् र युवा प्रणाली मार्फत उल्का पिण्ड रेकर्ड गरे। उसको विख्यात शैलीले चाँडै क्लब अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गर्‍यो जसले उसलाई 2011-12 सिजन भन्दा अघि उचाल्ने प्रयास गरे।
कर्ट जउमा - बायाँबाट स्थायी स्थितिमा तेस्रो - वाल्क्स-एन-वेलिनको वृद्धिमा। छवि क्रेडिट: FPCP।
यसैले, ज़ोमाले सेन्ट-Étienne सँग अप्रिल2को 2011nd मा पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र 31st अगस्त 2011 मा बोर्डो बिरुद्ध कूपे डे ला लिगु खेलको दौरान पहिलो टीमको लागि आफ्नो पेशेवर पदार्पण गरे। उनले सेन्ट-एटिएन्नेलाई 2013 मा कुपे डे ला लिगु शीर्षक जित्न सहयोग पुर्‍याए र शीर्ष उडान क्लबहरूमा एक आशाजनक क्यारियरको आशा गरे।
कर्ट Zouma जीवनी - प्रख्यात कथा को मार्ग:
XouUMX मा finally 2014 मिलियन (€ 12 मिलियन) को साढे पाँच वर्षको करारमा अंग्रेजी पक्ष चेल्सी FC मा हस्ताक्षर भएपछि Zouma अन्ततः 14.6 मा परिणत हुन चाहन्छ।
यद्यपि क्लबमा उत्साहित खेलाडीको कदम र ब्लुजको लागि उनको डेब्यू गर्न चाहना त्यति छिटो थिएन किनकि उनले अपेक्षा गरेको कारण चेल्सीले उसलाई बाँकी सत्रको लागि सेन्ट-एटिएनमा फिर्ता लिएका थिए।
२०१l मा हस्ताक्षर गरेपछि चेल्सीले कर्ट जउमाको सेन्ट-एटिएन्नेलाई edण दिए। छवि क्रेडिट: खेलकुद।
कर्ट Zouma बायो - ख्याति कथा उठ्नुहोस्:
केन्द्र-ब्याक अन्ततः Wycombe वान्डरर्स विरुद्ध एक प्री-मौसम मैत्री मा चेल्सी को लागी उनको euphoric डेब्यू गर्न को लागी मिल्यो। जर्सी नम्बर5का साथ ढाकिएको, उसले आफ्नो पहिलो पूर्ण अभियानमा चेल्सीलाई लिग कप र प्रिमियर लिग 2015 जित्न मद्दत गरेर प्रभावशाली उपलब्धिहरू तान्यो।
कर्ट Zouma २०१ 2015 मा चेल्सीको साथ प्रिमियर लिगको उपाधि जित्यो। छवि क्रेडिट: TransferMarket।
आजको लागि छिटो अगाडि, कर्ट Zouma चेल्सी एफसी को एक प्रतिष्ठित पहिलो-टीम सदस्य हो र उसको गति, जम्प, पासिंग, शुटि shooting र कौशल कौशलका लागि "अन्तिम डिफेन्डर" को रूपमा वर्णन गरिएको छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
कर्ट Zouma पत्नी र बच्चाहरू:
कर्ट Zouma लेखन को समयमा विवाहित छ। हामी तपाईलाई उनको डेटि history इतिहास र वैवाहिक जीवनको बारेमा तथ्यहरू दिन्छौं। सुरुमा, Zouma आफ्नी पत्नी Sandra भेटे अघि कुनै प्रेमिका थियो कि ज्ञात छैन।
राम्रो आधा एक फ्रान्सेली नागरिक हो र Zouma भन्दा दुई वर्ष पुरानो। जुमाकी १ years वर्षको उमेर थियो जब उनी २०१२ मा उनीसँग बिहे गरे। उनीहरुको वैवाहिक जीवन अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ र दुई छोरा - एक छोरा र छोरीले आशिष् पाएको छ - लेखनको समयमा।
कर्ट Zouma पत्नी र बच्चाहरु संग। छवि क्रेडिट: TheSportReview।
कर्ट Zouma परिवार जीवन:
कर्ट Zouma एक तल्लो वर्ग को पारिवारिक पृष्ठभूमि बाट आयो। हामी तपाईको पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरु तपाईलाई ल्याउँछौं।
कर्ट Zouma बुबा को बारे मा:
Zouma बुबा को नामबाट चिनिन्छ - केटा। उनी मध्य अफ्रीकी गणतन्त्रका एक नागरिक हुन् जसले हरिया चाराहारहरूको खोजीमा फ्रान्समा Zouma को जन्म हुनु भन्दा धेरै बर्ष पहिले बसाई सरेका थिए। फ्रान्समा छँदा, गाईले आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न कडा मेहनत गरे र अक्सर Zouma लाई प्रशिक्षणमा लगे। कर्ट सहयोगी बुवालाई क्रेडिट दिन्छ जब आफ्ना बच्चाहरूसँग सख्त र दयालु हुनु पर्छ भनेर जान्नको लागि।
कर्ट Zouma बुबा, केटा। छवि क्रेडिट: 5foot5।
कर्ट Zouma को आमाको बारेमा:
Zouma एक सानो परिचित आमा छ जो क्लीनरको रूपमा काम गर्‍यो। उनी Zouma खेल मा ठूलो चासो व्यायाम र जब सेन्ट-बैक एक १--वर्षीय को रूप मा सेन्ट Etienne संग आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा उपस्थित थियो। त्यसकारण उनी खुशीको आँसु थाम्न नसक्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन जब २०१ou मा जौमाले चेल्सीको लागि हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। सहयोगी आमाले जौमालाई उनको खेलहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सल्लाह दिन्छन् र उनको सबैभन्दा ठूलो फ्यान रहिरहेछन्।
कर्ट Zouma को भाईको बारेमा:
कर्टको5भाई बहिनीहरू छ जसमा एक बहिनी जसको बारेमा थोरै चिनिन्छ यद्यपि Zouma उनीहरुसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छ, ऊ आफ्नो जेठो भाई लिओनेलसँग धेरै नजिक छ जसले उसलाई फुटबल खेल्न प्रेरित गर्‍यो। लिओनेल लेख्ने समयमा बोर्ग-एन-ब्रेसे तेस्रो तहको लागि खेल्छन्। उनको पक्षमा, Zouma आफ्नो कान्छो भाई योन जो एक बोल्टो वान्डरर्स को लागि खेल्ने एक प्रेरणादायक प्रभाव को रूप मा सेवा गर्दछ।
कर्ट Zouma भाइहरू संग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
कर्ट Zouma आफन्तहरूको बारेमा:
Zouma को निकट परिवारबाट टाढा, आफ्नो बुवा हजुरबुबा हजुरआमा र हजुरआमा र हजुरआमा को बारे मा कम थाहा छ। त्यस्तै, Zouma काका, काकी, भतिजा र भतिजीहरु को बारे मा धेरै ज्ञात छैन जबकि उसका चचेरा भाईहरुलाई आजको आफ्नो प्रारम्भिक जीवनको उल्लेखनीय घटनाहरुमा पहिचान गरिएको छैन।
कर्ट Zouma निजी जीवन:
कुन कर्ट Zouma टिक बनाउँछ? हामी तपाईं उसको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दतको लागि उहाँको व्यक्तित्वको मेकिंगहरू ल्याउँदा हामी पछाडि बस्नुहोस्। सुरुमा, Zouma व्यक्तित्व वृश्चिक राशि व्यक्तित्व लक्षण को एक मिश्रण हो।
ऊ भावुक, मेहनती, सहज र मध्यम छ आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवन सम्बन्धित तथ्या reve्क प्रकट गर्दछ। ऊसँग केहि रूचिहरू र शौकहरू छन् जसमा भिडियो गेमहरू खेल्न, एनिमेजहरू हेर्ने, बास्केटबल खेलहरूसँगै रहन, साथीहरू र परिवारका साथ यात्रा र राम्रो समय बिताउने समावेश छ।
कर्ट Zouma anime एक मनोरञ्जन गतिविधि को रूप मा हेर्नुहोस्।
कर्ट Zouma जीवन शैली:
कर्ट Zouma लेखन को समय मा5मिलियन भन्दा अधिक को एक अनुमानित कुल मूल्य छ। उसको सम्पत्तीको उत्पत्ति उसले आफ्नो फुटबल प्रयास र अनुमोदन सम्बन्धी सौदाहरूबाट पाएको तलबबाट आउँछ।
नतिजाको रूपमा केन्द्र फिर्ता खर्च गर्न दिइन्छ र यस्तो सम्पत्ति छ कि फ्रान्सको लियोनमा उसको हवेली जस्तो एक्लै जीवनशैलीको राम्रोसँग बोल्छ, साथसाथै अन्य कारहरूमा पोर्श पानामेरा समावेश गर्ने विदेशी कारहरूमा पनि यात्रा गर्दछ।
कर्ट Zouma आफ्नो विदेशी सवारी मध्ये एक चित्रण।
कर्ट Zouma अनटोल्ड तथ्यहरु:
हाम्रो कर्ट Zouma बचपन कहानी र जीवनी चारै तिर, यहाँ तथ्यहरू छन् जुन सायद उनको बायो मा समावेश छ।
१ 1989। Film को फिल्म 'किकबॉक्सर' मा कर्ट स्लोएन, चरित्र स्लोआनको पछि झूमलाई पहिलो नाम "कुर्त" दिइयो, यस कारणले कि उनका बुबाआमा फिल्ममा चरित्रको रोमाञ्चक प्रदर्शन देखेर प्रभावित भए। उसको बीचको नाम 'खुशी' मध्य नामको लागि सकारात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्ने अफ्रिकी परम्परासँग मिल्दो छ।
कर्ट Zouma 'Kickboxer' (1989) छवि क्रेडिट: मिरर मा जीन क्लाउड भ्यान डम्मे चरित्र कर्ट स्लोएन पछि नामाकरण गरिएको थियो।
उनको लेख्ने समयमा कुनै ट्याटू छैन, न त उनी पिउने वा धुम्रपानमा भेटिएका छन्।
कर्ट Zouma लेखन को समयमा कुनै ट्याटू छैन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
आफ्नो धर्मको बारेमा, Zouma एक मुस्लिम र त्यहाँ समर्पित एक हो। अझ, उहाँ दिनमा एक पटक पाँच पटक प्रार्थना गर्नुहुन्छ र अगस्त 2018 मा तीर्थयात्रामा भाग लिनुभयो।
कर्ट Zouma साथ तीर्थयात्रामा पल पोगाबा र साथीहरू। छवि क्रेडिट: ट्विटर।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो कर्ट Zouma बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।